samsung ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ………..? | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
samsung ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ………..?
Posted on October 27, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	samsung ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ………..? လွတ်ပစ်လိုက်တော့ မှာလား ……? ဆိုင် ပို့် လိုက်တော့ မလား ကြိုးစားကြည့် ချင်သေးလား တော်ရုံတန်ရုံ ပျက် တာလောက်နဲ့ကတော့ဒီနည်းလေးနဲ့ကြိုးစားကြည့် လိုက်ပါ။အဆင်ပြေသွားပါလိမ့် မယ်။ကဲအောက်မှာနည်း
အဆင့် ( ၁ ) ——————————-
အဆင့်( ၂ ) ————————–
အဆင့် ( ၃ ) ——————————–
Java ကိုpc မှာ install လုပ်ပါ။ Download Java site ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ။ Direct link , solidfiles , zippyshare one-click Unbrick tool ကိုဒီမှာယူပါ install လုပ်ပါ ။ Direct link , zippyshare , solidfiles window users အတွက် .rar/.zip extractor software ကို ဒီမှာယူပါ install လုပ်ပါ။ DOWNLOAD. အဆင့် ( ၄ ) ————————–
၂ ။ ယခုဆိုရင် ‘OneClick’ folder ကိုရပါပြီ။ ၃။ ‘OneClick.jar’ file ကို copy ယူပြီး ‘OneClick &gt; heimdalloneclick &gt; resources &gt; HeimdallPackage’ folderထဲ ကို paste လုပ်ပေးပါ။
၇။ . ဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာကို usb ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး “unsoft brick” လေးကိုနိုပ်ပြီး recovery လုပ်နိုင်ပါပြီ ၈ ။ samsung usb driver ကိုဒီမှာယူပါ။ DOWNLOAD –
This entry was posted in android software dead ဖုန်းများ. Bookmark the permalink.
← Internet Download Manager 6.18 Build4Final (Latest Version)	android ဖုန်းတွေမှာ touch screen သေနေတာကိုပြင်မယ်။ →
One thought on “samsung ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ………..?”	zayarmin htike says:	October 31, 2013 at 9:44 am	အစ်ကို ကျွန်တော့် ဖုန်းက p6 ပါ။Firmware တင်နေတုန်း power ကို သွားနှိပ်လိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒါ ပြန်တင်တော့ Checking System Module ရောက်ရင် power ပြန်ကျသွားပါတယ်။recovery လည်းမရတော့ပါ။service center လည်းမကယ်နိုင်တော့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ အစ်ကို။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးပါ။